China 3003 aluminium coils fekitori uye vagadziri | Hanyu
3003 aluminium coils rudzi rweAl-Mn alloy, ndiyo inonyanya kushandiswa antirust aluminium. Iyo ine yakanaka formability, weld kugona uye kusagadzikana kuramba. Iyo inoshandiswa kugadzirisa matunhu ane kugona kwakanaka uye yakakwirira yekudzvinyirira kuramba uye kugona kwe weld.
Alloy mhando: 3003 aluminium coils
Kuonda (mm) ： 0.05 - 4.0
Upamhi (mm) ~ 6-2000
Zvishandiso: 3003 aluminium coils inonyanya kushandiswa kune ngarava, maredhiyo, midziyo yemotokari, anti-corrosion uye kuchengetedza kupisa, mabhodhi ekudhinda, zvekuvakisa, ganda rezvigadzirwa zvemagetsi, simbi zvigadzirwa, hollow girazi aluminium mitsetse, nezvimwe.
Iyo 3003 yakajairika inoenderana nesimba zvine mwero, yakanaka machining performance uye yakanaka yekudzivirira corismion.Ini inowanzo kupetwa nekutsikirirwa, asi kazhinji haiumbirwe .Sezve malleable alloy, haishandisirwe kuita casting.Inowanzoshandisirwa simbi yesimbi. zvishandiso senge maturu, mapepa ezasi, matenga uye siding .Iyo inonyanya kushandiswa ndeye 3000 nhepfenyuro "aluminium-manganese alloy", umo mazana matatu mazana matatu, mazana matatu nemazana matatu, mazana matatu nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi matatu, 3103, 3105 nedzimwe nzira dzakashandiswa zvakanyanya, nekuti zvirimo manganese mu aluminium-manganese alloy yakagadzikana.
Yepfuura: 1100 aluminium coils
Inotevera: 5052 aluminium coils
3003aluminum Coil, aluminium coil vanopa